Faah faahin:- Dab xoogan oo saakay ka kacay xaafadda Buulo-xuubey ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dab xoogan oo saakay ka kacay xaafadda Buulo-xuubey ee magaalada Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dab aad u xoogan oo barqadii saakay ka kacay guri ku yaalla xaafada Buulo-xuubey ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Dabkaasi ayaa la sheegayaa inuu ka kacay guri Villa ah oo ku yaalla kasoo horjeedka suuqa Buulo-xuubey, waxaana halkaasi gaaray gaadiidka dab damiska gobolka Banaadir oo si weyn ula tacaalay daminta dabkaasi.
Ciidanka nabad-sugidda degmada Wadajir oo gaaray halka uu dabka ka dhacay ayaa xiray dhamaan wadooyinka soo gala goobtaasi, waxayna dadka halkaasi ku sugnaa ku amrayeen inay ka fogaadaan guriga gubanaya, si aanay khasaare kale u dhicin.
Illaa iyo haatan si rasmi ah looma oga qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dabkaan, wuxuuna dabkaan kusoo beegmayaa xilli maalintii Isniinta aheyd uu dab ka kacay suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kaas oo ka dhashay qasaare xoog leh.
Si kastaba ha ahaatee, muddooyinkaan ugu dambeysay waxaa magaalada Muqdisho kusoo badanaayay dabka ka kacaya guryaha, suuqyada iyo xarumaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay, waxayna maamulka gobolka Banaadir sheegeen inay arrintaan wax ka qaban doonaan.